အာဆင်နယ်၏ အိပ်မက်အသင်း (သို့) ၀င်းဂါး၏ လွတ်သွားသော ငါးကြီးများ - News @ M-Media
အာဆင်နယ်၏ အိပ်မက်အသင်း (သို့) ၀င်းဂါး၏ လွတ်သွားသော ငါးကြီးများ
in အားကစား — January 27, 2015
ဇန်နဝါရီ ၂၇ ၊ ၂၀၁၅
ပရီးမီးယားလိဂ် သက်တော်ရှည်နည်းပြ အာဆင်ဝင်းဂါးရဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းမှာ ဖလားတစ်လုံး ရဖို့ကိုတောင် ခက်ခက်ခဲခဲ ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ အဓိကတော့ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ကစားရတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်လိုပြိုင်ပွဲမျိုးမှာ ကြံ့ခိုင်မှုကို ရေရှည်ထိန်းထားနိုင်တဲ့ ကစားသမားမျိုး မရှိတာ၊ ခြေစွမ်းပုံမှန်ပြနိုင်တဲ့ ကစားသမားနည်းတာ၊ အသင်းက တစ်ချို့ ကစားသမားတွေဟာ ငယ်ရွယ်လွန်းပြီး အတွေ့အကြုံ နုနယ်တာကြောင့် ပြိုင်ပွဲက Tempo မြင့်လာတဲ့အခါမှာ အမှားမှား အယွင်းယွင်း ဖြစ်တတ်တာတွေကြောင့် အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ကစားပုံက များသောအားဖြင့် တက်လိုက်၊ ကျလိုက် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး အာဆင်ဝင်းဂါးရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ပေါ်လစီကလည်း အသင်းကျရှုံးခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းအချက်တွေထဲမှာ ပါပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေးအကန့်အသတ်ကြောင့် ကစားသမားကောင်းတွေကို ကြေးကြီးပေးဝယ်ဖို့ အခက်တွေ့တဲ့ ၀င်းဂါးတစ်ယောက် ခေါ်ယူသင့်ခေါ် ယူထိုက်တဲ့ ကစားသမားတစ်ချို့အတွက်လည်း တွန့်ဆုတ်နေတတ်တာကြောင့် ရာသီတိုင်း အသင်းမှာ ကစားသမားတွေ လိုအပ်နေတတ်ပါတယ်။ ကစားသမားတစ်ချို့ဟာလည်း အာဆင်နယ်အသင်းကို ရောက်လုနီးနီးဖြစ်ခဲ့ပြီးမှ အခြား အသင်းကိုရောက်သွား၊ ခြေစွမ်းပြနိုင်ကာ ကမ္ဘာကျော်ကစားသမားတွေ ဖြစ်သွားတဲ့ သာဓကတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးရှိပါတယ်။ အဲဒီကစားသမားတွေကိုတော့ လွတ်သွားတဲ့ ငါးကြီးများလို့ သမုတ်ချင်ပါတယ်။ အာဆင်ဝင်းဂါး အာဆင်နယ်ကို ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ သက်တမ်းတစ်လျှောက် လွတ်သွားခဲ့တဲ့ ငါးကြီးတွေရဲ့ အကြောင်းကို M-Media ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သီဘောက်ကော်တီယို့စ် ချယ်ဆီးကိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက် ဒီနှစ်မှာ နေရာပျောက်သွားတဲ့ ချက်တစ်ယောက် အာဆင်နယ်ရောက်ကောင်းရောက်နိုင်မှာပါ။
ဒါပေမယ့် ၀င်းဂါးက ချက်ကို ခေါ်ဖို့အတွက် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ် ကလောက်ကတည်းက စောင့်ကြည့်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီနောက် ၂ နှစ်လောက်နေပြီးမှ ပီတာချက်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ကို ရောက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
`ကျွန်တာ် ရန်နက်စ်အသင်းကို မရောက်ခင်တုန်းက အာဆင်နယ်ရဲ့ စောင့်ကြည်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ် မရခဲ့တာကြောင့် ဒီအခွင့်အရေးကို လွဲချောခဲ့ရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်ဟာ အင်္ဂလိပ်လိဂ်မှာ ကစားဖို့ လုံလောက်အောင် မကောင်းသေးဘူးလို့ အာဆင်နယ် ဘောလုံးကင်းထောက်က ထင်ပုံပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် နောက်ဆုံးမှာတော့ ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး´ လို့ ချက်က The Sun သတင်းစာကို ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။
ဘာစီလိုနာရဲ့ ပါရမီအရှိဆုံး လူငယ်ကစားသမားဘ၀က ပီကေးကိုခေါ်ယူဖို့ အာဆင်ဝင်းဂါးက ၃ ကြိမ်တောင် ကြိုးစားခဲ့ပါသတဲ့။
`ဖာဘရီဂက်စ်၊ မက်ဆီနဲ့ ပီကေးတို့ကို ကျွန်တော်တို့ ခေါ်ယူချင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖာဘရီဂက်စ်အတွက်ပဲ အလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်´ လို့ ၀င်းဂါးက ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။
ပီကေးတစ်ယောက် နောက်ဆုံးမှာ အင်္ဂလန်ရောက်လာခဲ့ပေမယ့် မန်ယူမှာ မက်လောက်စရာ ခြေစွမ်းမျိုးတော့ မပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘာစီလိုနာပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ အသင်းရဲ့ အဓိကနောက်ခံလူတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ခေတ်သစ်ဘောလုံးလောကရဲ့ အကောင်းဆုံးတွေထဲက တစ်သင်းဖြစ်တဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့အတူ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ၂ ကြိမ်တိုင်တိုင် ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပီကေးတစ်ယောက် အခုအချိန်အထိ အကောင်းဆုံး နောက်ခံလူစာရင်းမှာ ရှိနေပါသေးတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ် လက်ရှိချန်ပီယံ မန်စီးတီးကို ဦးဆောင်နေသူ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကွန်ပနီ အန်ဒါလက်ခ်ျမှာ ကစားနေစဉ် ၂၀၀၆ ခုနှစ်လောက်က ဥရောပအသင်းကြီး အများအပြားက ခေါ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပြီး အဲဒီမှာ အာဆင်နယ်လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
`ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်က အီမီလီယို ဘူထရာဂီနို၊ ဘာစီလိုနာက အကြီးအကဲတွေနဲ့ တွေ့ခဲ့ပြီး အာဆင်နယ်က အာဆင်ဝင်းဂါးနဲ့လည်း တွေ့ခဲ့ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗင်းဆင့်တစ်အသင်းကြီးတစ်သင်းကို ချက်ခြင်းပြောင်းရွှေဖို့ဆိုတာ မှန်ကန်တော့ အဖြေတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ကို့ အရေးမပေးတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ သူနေတတ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဗင်းဆင့်ဟာ တတိယဦးစားပေးကစားသမားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်ပဲ ဟမ်းဘတ်မှာရှိနေခဲ့တာပါ´
အခုတော့ ကွန်ပနီတစ်ယောက် မန်စီးတီးနဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို ၂ ကြိမ် ကိုင်မြှောက်နိုင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး နောက်ခံ လူတွေထဲက တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်လို့နေပါပြီ
ကွင်းလယ်ဗိုလ်ချုပ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ခုနောက်ပိုင်း ကွင်းလယ်ကို စိုးမိုးနိုင်တဲ့သူကို မက်ခီလီလီ နာမည်နဲ့ တင်စားဖော်ပြကြပါတယ်။ တိုက်စစ်နဲ့ခံစစ်ကို ထိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့ မက်ခီလီလီကို အာဆင်ဝင်းဂါးတစ်ယောက် ခေါ်ယူဖို့ ကြိုစားခဲ့ပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။
၀င်းဂါးကတော့ တစ်နိုင်ငံတည်းသား မက်ခီလီလီကို သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအရွယ် အသက် ၂၃ နှစ်မှာ ခေါ်ယူဖို့ နီးစပ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
`မက်ခီလီလီက ကျွန်တော်တို့နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဖို့ တော်တော်လေး နီးစပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၆ ခု သြဂုတ်လ ဗီယာရာရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်း ဆက်တိုက်ဆိုသလို ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီတုန်းက သူ ပြင်သစ်ကလပ် နန်တီအသင်းမှာပဲ ရှိပါသေးတယ်´ လို့ ၀င်းဂါးက ပြောပါတယ်။
အာဆင်နယ်ကို မရောက်ခဲ့တဲ့ မက်ခီလီလီတစ်ယောက် မာဆေးလ်၊ ဆဲလ်တာဗီဂို၊ ရီးယဲလ်နဲ့ ချယ်ဆီးတို့မှာ အောင်မြင်မှုသရဖူဆောင်းခဲ့ပြီး အခုတော့ အနားယူသွားခဲ့ပါပြီ။
၂၀၀၃ ခုနှစ်က ကစားခဲ့တဲ့ ဘားနက်အသင်းနဲ့ ခြေစမ်းပွဲမှာ အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့အတူ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ တိုးယေးဟာ ၀င်းဂါးခေါ်ယူဖို့ အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးပါပဲ။
အကိုဖြစ်သူ ကိုလိုတိုးယေးရှိတဲ့ အာဆင်နယ်မှာ အစမ်းလာကစားခဲ့ပြီး အပြီးသတ်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ နီးစပ်ခဲ့ပေမယ့် အလုပ်လုပ် ခွင့်ပါမစ်ကြောင့် ဒီခေါ်ယူမှု ပျက်ခဲ့ရပါတယ်။
`(မခေါ်ယူနိုင်လို့ နောင်တရခဲ့တဲ့) စာရင်းမှာ တိုးယေးဟာ ထိပ်ဆုံးကပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ယာယာတိုးယေးဟာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ သဘောတူညီချက် ရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ မေ့ပစ်လို့မရပါဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ စာချုပ်မချုပ်ချင်လို့ သူ ယူကရိန်းကို ရောက်သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လ်ဂျီယံက သူ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို ကျွန်တော်တို့ စောင့်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ အမှားတွေရှိခဲ့ပြီး (ယူကရိန်းကလပ်) မီတာလာရ် ဒွန်တက်စ်ကို သူရွေးချယ်သွားတာက သူ့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီမှာက နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မရှိဘဲ ကစားနိုင်တယ်လေ´ လို့ လွတ်သွားတဲ့ ငါးကြီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၀င်းဂါးက ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။
သိပ်မကြာခင်ကပဲ လွတ်သွားတဲ့ ဒီငါးကြီးအကြောင်းကို ဖွင့်ဟခဲ့တာပါ။ ရီးယဲလ်မှာ အကောင်းဆုံး အသုံးတော်ခံခဲ့ပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တဲ့ ဒီမာရီယာတစ်ယောက် ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီက မန်ယူကို ပေါင် သန်း ၆၀ နဲ့ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
၀င်းဂါးကတော့ ဒီမာရီယာကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၉ နှစ်လောက်ကတည်းက ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ နီးစပ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
`သူ့အသက် ၁၇ နှစ်လောက်ကတည်းက ကျွန်တော်တို့ တွေ့တာပါ။ သူ့ကို ဒီကိုလာဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဆန္ဒရှိခဲ့ပေမယ့် သူ ပေါ်တူဂီကို သွားလိုက်ပါတယ်။ ပေါ်တူဂီကနေ တစ်ဆင့် စပိန်ကို ရောက်သွားပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်ပါလဲ? သူ ဒီမှာ အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ် မရလို့ပါဘဲ´
ဒါက ဘာကိုပြသလဲဆိုတော့ ငွေးကြေးအများကြီးတန်မှ ဒီမာရီယာတစ်ယောက် အင်္ဂလန်ရောက်ခွင့် ရတယ်ဆိုတာပါပဲ။
၂၀၀၆ ခုနှစ် ဆောက်သက်တမ် အကယ်ဒမီကနေ ဝေါလ်ကော့ကို ခေါ်တဲ့အချိန် အဲဒီတုန်းက နောက်တန်း ဘယ်အစွန်မှာကစားတဲ့ ဘေးလ်ကို မခေါ်လိုက်နိုင်တာဟာ ကြီးမားတဲ့ အမှားတစ်ခုလို့ ၀င်းဂါးက ၀န်ခံခဲ့ပါတယ်။
အသင်းမှာ အက်ရ်ှလေကိုးလ်၊ ကလစ်ချီတို့ ရှိနေတာကြောင့် မလိုအပ်သေးဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသတဲ့။ အဲဒီနောက်ပိုင်း စပါးကိုရောက်လာတဲ့ ဘေးလ်တစ်ယောက် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမား ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ရီးယဲလ်က ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် ၈၆ သန်းအထိ ပေးခေါ်ခဲ့ရတဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက် ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
`ကွင်းလယ်မှာကစားနိုင်တဲ့သူ့ကို မခေါ်မိခဲ့တာက ကြီးမားတဲ့အမှားတစ်ခုလို့ ကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်။ စပါးမှာ သူစကစားတုန်းက ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီနောက် သူ ကွင်းလယ်မှာဝင်ကစားခဲ့ပြီး ခြွင်းချက်မရှိလောက်အောင် ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ကစားသမားတစ်ဦးရဲ့ဘ၀ဟာ မှန်ကန်တဲ့နေရာမှာ ကစားရတဲ့အပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါ´ လို့ ၀င်းဂါးက ပြောခဲ့ပါတယ်။
၀င်းဂါး နောင်တအရဆုံး ကစားသမားတစ်ဦးပါပဲ။ အခုလက်ရှိ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ကို မန်ယူက မခေါ်ယူခင် ပေါင် ၄ သန်းလောက်နဲ့ အာဆင်နယ်က ခေါ်ယူခွင့်ရခဲ့တာပါ။
`သူ ဒီကိုရောက်လာဖို့ အရမ်းကို နီးစပ်ခဲ့ပါတယ်။ နံပါတ် ၉ နဲ့ အာဆင်နယ်ဂျာစီတစ်ထည်တောင် သူရခဲ့ပါသေးတယ်။ ပြဿနာက (မန်ယူလက်ထောက်နည်းပြအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံသား) ကွီယော့ဇ် မန်ယူရောက်သွားတာပါပဲ။ သူက ရော်နယ်ဒိုကို လစ္စဘွန်းမှာကတည်း သိနေတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဆီကနေ မန်ယူက လုသွားတာပါ။ ဘ၀ဆိုတာ ဒီလိုပါပဲ။ ခင်ဗျားက အကောင်းဆုံး ပေးဆပ်ပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း ခင်ဗျားထက် ပိုသာတဲ့သူတွေ ကို တွေ့ရတာပါပဲ။ ဖြစ်တတ်ပါတယ်´
ရော်နယ်ဒိုနဲ့ပတ်သက်လို့ ၀င်းဂါးက ပြောခဲ့တာပါ။
ဘာကာစတား မက်ဆီကို အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်မှာ အာဆင်နယ်က ခေါ်ခွင့်ရတာပါ။ မက်ဆီကို ခေါ်ယူခွင့် ဆုံးရှုံးခဲ့တာကတော့ အသင်းနဲ့နီးတဲ့နေရာမှာ မက်ဆီနဲ့ မိသားစု နေထိုင်နိုင်တဲ့ တိုက်ခန်းတစ်ခုကို အာဆင်ဝင်းဂါးက မစီစဉ်ပေးနိုင်လို့ဆိုပြီး သတင်းတွေက ဖော်ပြကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အာဆင်ဝင်းဂါးကတော့ ဒီထက်ပိုရှုပ်ထွေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
`အဆုံးမှာ သူက ပြောင်းရွှေ့ဖို့ စိတ်အားထက်သန်မှု မရှိပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲဒီအချိန်မှာ ဖာဘရီဂက်စ်လည်း အသင်းကိုရောက်နေပြီး၊ သူတို့နှစ်ယောက်က တစ်သင်းထဲမှာ ကစားခဲ့ကြသူတွေပါ။ တိုက်ခန်းကိစ္စကြောင့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ဆုံး မက်ဆီဟာ ဘာကာမှာ အထိုင်ကျသွားတာလည်း ပါပါတယ်´
အာဆင်နယ်နည်းပြသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ အပေးဆပ်ရဆုံး အပြောင်းအရွှေ့အမှားတစ်ခုလို့ ၀င်းဂါးက ၀န်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လည်းဆိုတော့ ပေါင် ၁ သိန်းလောက်နဲ့ ဒရော့ဘာကို ခေါ်ယူနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးကို လက်လွှတ်လိုက်ရလို့ပါ။
အဲဒီအချိန်က ဒရော့ဘာတစ်ယောက် ပြင်သစ်ကလပ် လီမန့်စ်မှာ ကစားနေချိန်ဖြစ်ပြီး ၀င်းဂါးရဲ့ ဘောလုံးကင်းထောက်ကလည်း ပုံမှန် သွားသွားကြည့်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၀င်းဂါးကတော့ ၀ယ်ဖို့ ငြင်းခဲ့ပါတယ်။
ချယ်ဆီးက ဒရော့ဘာကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ မာဆေးလ်ကနေ ခေါ်ယူခဲ့ပြီး အဲဒီအချိန် ဒရော့ဘာရဲ့ တန်ကြေးဟာ ပေါင် ၂၄ သန်း ရှိနေပါပြီ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ ပေါင် ၁ သိန်းဆိုတာဟာ ဒရော့ဘာရဲ့ တစ်ပါတ်လုပ်ခတောင် မရှိတော့ပါဘူး။
၀င်းဂါးက `သူ လီမန့်စ်မှာရှိတုန်းက ကျွန်တော်တို့ အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ဦးတည်း စောင့်ကြည့်ခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့က သူဟာ အင်္ဂလန်မှာကစားဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးလို့ ကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ အမှားတစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘောလုံးလောကမှာဆိုရင် ဒါကို အားလုံးက နားလည်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာ ဟင်နရီရှိနေတယ်။ ဒရော့ဘာရဲ့တိုးတက်မှုကို စောင့်ကြည့်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ လုံးဝ ငြင်းခဲ့တာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး´ လို့ ဆိုပါတယ်။
အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် ကစားသမားတစ်ယောက်ကို ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ အစမ်းကစားခိုင်းတယ်ဆိုတာ သိပ်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သာမန်ကစားသမားမဟုတ်တဲ့ အီဗရာဟီမိုဗစ်တစ်ယောက် ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုး ရခဲ့ပါတယ်။
`အာဆင်ဝင်းဂါးက ကျွန်တော့်ကို အာဆင်နယ်အင်္ကျီ ပေးခဲ့ပါတယ်။ နံပါတ် ၉ အင်္ကျီဖြစ်ပြီး `အီဗရာဟီမိုဗစ်´လို့လည်း နာမည်ထိုးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်သိပ်ပျော်ခဲ့ပြီး ဒီအင်္ကျီနဲ့ ဓာတ်ပုံတောင် ရိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ(၀င်းဂါးက)က `မင်းဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာ၊ ဘယ်လိုကစားသမားမျိုးလဲဆိုတာ ငါကြည့်ချင်တယ်။ အစမ်းကစားကြည့်´လုိ့သာ ပြောပြီး ပိုပြီးသေချာတဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးတော့ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်မယုံကြည်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော်က `ရပါတယ်။ ဇလာတန်က စစ်ဆေးရမယ့် ကစားသမားမျိုးမဟုတ်ဘူး´ ဆိုတာမျိုးကို လိုချင်တာပါ´ လို့ အာဆင်နယ်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းကို အီဗရာဟီမိုဗစ်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
၀င်းဂါးလွတ်သွားတဲ့ ငါးကြီးတွေက ဒါတွေပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဘရာဇီးလ်ရဲ့ ဂန္တ၀င်နောက်တန်း ဘယ်အစွန် ကစားသမား ရောဘတ်တိုကားလို့စ်၊ ဘာစီလိုနာမှာ နာမည်တစ်ခု ရေးထိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ ဆင်မြူယဲလ်အီတိုး၊ အခုလက်ရှိ စပါးမှာ ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ ဟယ်ရီကိန်း၊ မန်ယူရဲ့ ဂန္တ၀င်တိုက်စစ်မှူး ရုဒ်ဗန်နစ္စတယ်ရွိုင်း၊ ချယ်ဆီးကွင်းလယ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း မိုက်ကယ် အက်ဆီယန်၊ နယူးကာဆယ်ကွင်းလယ်က မောင်းနှင်အား ဂျိုယေးဘာတန် စတဲ့ကစားသမားတွေဟာလည်း အာဆင်နယ်ကိုရောက်ဖို့ နီးစပ်ခဲ့သူတွေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အာဆင်နယ်ကို မရောက်ခဲ့ကြပါဘူး။
ဒီလူတွေသာ အာဆင်နယ်ကို ရောက်ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်တော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုလောက်အတွင်းမှာ အာဆင်နယ်ဟာ ဖလားပေါင်းများစွာကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး ဥရောပမှာ ဒီထက်ပိုပြီး သြဇာညောင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုတော့ ငြင်းမယ့်လူ မရှိလောက်ဘူးလို့ ထင်ကြောင်းပါ……………..
Tags: Arsenal, EPL, PremierLeague